साफ च्याम्पियनसिप: नेपाल र बङ्गलादेशको खेल आज « Harekpal
साफ च्याम्पियनसिप: नेपाल र बङ्गलादेशको खेल आज
हरेकपल October 13, 2021
साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल र बङ्गलादेश खेल्दैछन् । नेपालले जिते फाइनल प्रवेश गर्नेछ ।
मालेमा रहेको राष्ट्रिय रङ्गशालामा नेपाल र बङ्गलादेशबीचको खेल दिउँसो पौने ५ बजे सुरु हुनेछ । नेपालले अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल यात्रा तय गर्न सकेको छैन । तर, बङ्गलादेशविरुद्ध बराबरी वा जितको नतिजाले नेपाल पहिलो पटक साफको फाइनलमा पुग्नेछ ।
साफमा सेमिफाइनलसम्मको यात्रा नेपालको ठूलो उपलब्धि हो । श्रीलङ्काले चार खेल खेल्दा अन्य टोलीले तीनरतीन खेल खेलेका छन् । लिग तालिकामा समान ६ अङ्क भए पनि गोल अन्तरको आधारमा आयोजक माल्दिभ्स शीर्ष स्थानमा उक्लिँदा भारतसँगको पराजयले नेपाल दोस्रो स्थानमा झरेको छ ।
साफ च्याम्पियनसिपमा नयाँ इतिहास रच्ने सङ्घारमा नेपाली टोली छ । अब नेपाललाई फाइनल पुग्न मात्र एक अङ्कको आवश्यकता छ । नेपालले सुरुआती दुई खेलमा लगातार जित निकालेको थियो । माल्दिभ्सलाई १–० ले हराएको नेपालले श्रीलङ्कालाई ३–२ ले हराएको थियो ।
तर, नेपाल भारतसँग १–० ले पराजित भएको थियो । आज नै भारतले माल्दिभ्सविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले फाइनल प्रवेश गर्न बंगलादेशविरुद्ध राम्रो नतिजा निकाल्ने बताएका छन्। बंगलादेशविरुद्धको खेलअघि मंगलबार सम्पन्न प्रि–म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै प्रशिक्षक श्रेष्ठले फाइनल पुग्न राम्रो नतिजा निकाल्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
आईपीएलको उपाधि चेन्नाईलाई
नेपाललाई पहिलोपटक साफ च्याम्पियन बन्ने अवसर
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा नेपाली फुटबल टिमलाई बधाई
आईपीएल: कोलकाता फाइनलमा,दिल्ली स्तब्ध
साफ च्याम्पियनसिप: नेपाल र भारत फाइनलमा भिड्ने
आईपीएल: बेङ्ग्लोरलाई हराउदै कोलकाता क्वालिफायरमा
सर्पको डसाइबाट एक युवकको मृत्यु
काँचुली फेर्दै बाग्लुङका ग्रामीण बजार ﻿
इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व रमजान शुरु
हावाहुरी र वर्षाको सम्भावना
आज चतुर्दशीश्राद्ध, पञ्चाङ्गसहित हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७..
आज प्रदोषव्रत, त्रयोदशीश्राद्धका साथै मघाश्राद्ध पनि हेर्नुहोस्..
आज सोमवार, द्वादशीश्राद्ध पनि हेर्नुहोस् आजको दिन..
खर्चगर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के के हुन्..
क्रोध के हो ? हेर्नुहोस् आजको नीति..
कुन काम कतिजनाले गर्नुपर्छ ? आजको नीति..